Blog bilaogy ara-pahasalamana ho anao amin'ny fanaintainanao | Vondt.net
Tongasoa eto amin'ny toeram-pitsaboana vonjy maika
- Manampy anao amin'ny làlana mankany amin'ny fahasalamana ianao
Manampy anao izahay amin'ny tolo-kevitra eo akaikinao amin'ireo manam-pahaizana momba ny fahasalamana hozatra sy hozatra.
Fivoriana feno amin'ny fanatanjahantena programa, sns.
Tsidiho ary misoratra anarana maimaimpoana amin'ny fantsona Youtube izahay ho an'ny workout sy horonan-tsary an-jatony.
Manome fanavaozana isan'andro isan'andro ao amin'ny pejinay Facebook izahay. 365 andro isan-taona.
Chiropraktika ankapobeny sy fanatanjahantena
[M.Sc Chiropraktika, B.Sc Fahasalaman'ny Fahasalamana]
- Soatoavina fototra miaraka amin'ny Patient in Focus
Salama, i Alexander Andorff no anarako. Ny kiropraktika tamin'ny alàlan'ny fitsaboana sy ny fitsaboana fanarenana. Lehiben'ny mpanatontosa ny Vondt.net sy ny Clinic Vondt aho. Amin'ny maha-fifandraisana vaovao voalohany amin'ny fikorontanan'ny musculoskeletal, tena fahafinaretana ny manampy ny marary miverina amin'ny fiainana tsaratsara kokoa.
Miaraka amin'ny mpanaraka maherin'ny 70000 amin'ny media sosialy, ary koa ny fomba fijerin'ny pejy 2.5 tapitrisa isan-taona, tsy mahagaga ihany koa ny maro fa mamaly isan'andro ny fanontaniantsika momba ireo mpitsabo voatolotray manerana ny firenena isika raha sarotra ny manatona antsika ara-jeografika.
Indraindray isika dia mahazo fanontaniana be dia be ka mety ho sarotra ny mamaly azy rehetra, ary izany indrindra no antony namoronantsika faritra iray antsoina hoe «tadiavo ny tobim-pahasalamanao»- izay toerana anoloranay koa, ankoatry ny toeram-pitsaboana mifandraika aminay, ny tolo-kevitray ho an'ireo mpitsabo manana alàlana imasom-bahoaka ao amin'ny faritra misy anao.
Jereo eto ny tobim-pitsaboana misy anay
Aza misalasala mifandray amiko Fantsona Youtube izahay raha manana fanontaniana na hevitra ianao.
Mifandraisa amiko amin'ny Youtube
Pejy 1 amin'ny 61123>»